आधुनिक साजसज्जामा शुक्ल यजुर्वेद पाठ विधिसहितको पुस्तक सार्वजनिक « Lokpath
२०७७, १४ पुष मंगलवार १०:०८
आधुनिक साजसज्जामा शुक्ल यजुर्वेद पाठ विधिसहितको पुस्तक सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ पुष मंगलवार १०:०८
काठमाडौं । नेपालका अधिकांश वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले यज्ञ गर्न प्रयोग गर्ने मन्त्रको स्रोत ‘वाजसनेयि–माध्यन्दिन–शुक्लयजुर्वेद–संहिता’ को नेपाली प्रकाशनबाट प्रकाशित शुद्ध पुस्तक बजारमा आएको छ । वेदपाठको नियमसहित राखिएको यो पुस्तक गुरुकुल प्रकाशन देवघाटले प्रकाशित गरेको हो ।
पुस्तकको सम्पादन स्वामी केशवानन्द गिरीले गरेका छन् । वेदको पुस्तक पत्रमा प्राचीन खालको हुने भए पनि यो पुस्तक भने ‘डिमाइ साइज’को आधुनिक किसिमको छ । रेञ्जेनको खोलसहितको पुस्तकमा फन्ट पनि आधुनिक प्रयोग गरिएको छ । युनिकोडको यो फन्ट पूर्वीय वाङ्मयलाई प्रविधिसँग जोड्ने अभियानमा लागेका स्वामी केशवानन्द गिरीले नै विकास गरेका हुन् । यसैले फन्टको नाम पनि केएन स्वामी राखिएको छ ।
पुस्तकमा वेद पाठको नियमसहित हात सञ्चालन र उच्चारण विधि पनि उल्लेख गरिएको छ । वेदको भूमिका, पृष्ठभूमिलाई नेपाली भाषामा पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । वेदको विषयमा जान्न चाहने पाठकका लागि पनि पुस्तक उपयोगी छ । वेदका कतिपय विषयका पृष्ठभूमि टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ । आकर्षक कागज उपयोग गरेर झोला प्रकारको गातामा सजिएको ३६० पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ८०० तोकिएको छ ।
आफूले गुरुकुलमा निःशुल्क पढेको र सन्न्यास लिई सबैका लागि ज्ञान बाँड्ने अभियानमा लागेकाले लागत मात्र उठ्ने गरी मूल्य तोकिएको स्वामी केशवानन्द गिरी बताउँछन् । वेदको पृष्ठभूमि बुझेर आधुनिक डिजिटल फन्टमा पाठ गर्न चाहनेका लागि पुस्तक उपयोगी छ । पुस्तक प्रकाशनसँगै स्वामी केशवानन्दले शुक्लयजुर्वेदको सारस्वरसहितको भिडियो बनाई युट्युब च्यानलमा राख्ने तयारीसमेत गरेका छन् । श्रुतिसमेत भनिने वेदलाई कुनै समय कागजमा लेख्नसमेत नहुने धारणा राखिन्थ्यो । गुरुले शिष्यलाई कानमा सुनाएर बाँडिने ज्ञान भएकाले श्रुति परम्पराका रूपमा समेत चर्चित छ । आधुनिक युगमा मानिसको व्यस्तता बढेसँगै गुरुबाट वेद सुनेर कण्ठस्थ गर्न फुर्सद स्मरण गर्न सक्ने क्षमतासमेत नहुने भएकाले सारस्वरसहितको भिडियो सार्वजनिक गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
युट्युबमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा शुद्धरूपमा सारस्वर र उच्चारण विधिसहित वेद पाठ सिक्न चाहनेका लागि पनि उपयोगी हुनेछ । चार÷पाँच जनाको समूहमा यो काम गर्न लागिएको स्वामी केशवानन्द बताउँछन् । यसले गुरुकुलमा वेद पढिरहेका विद्यार्थी र पढाउने गुरुलाई समेत स्रोत सामग्रीको काम गर्नेछ । पूर्वीय दर्शनलाई प्रविधिसँग जोड्न लागिपर्नुभएका उनले संस्कृत सिक्न चाहनेका लागि संस्कृत भाषामै कार्टुनसमेत बनाउन थालेका छन् । दुई भाग कार्टुन तयार भई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिकसमेत गरिसकिएको छ ।
रवीन्द्र मिश्रको कविता – ‘तिम्रो र मेरो नाममा’
काठमाडौं – आज मे १ तारिक अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको
काठमाडौं । विश्व हिन्दी दिवसका अवसरमा आज राजधानीमा हिन्दीमा अनुवाद गरिएका पाँच वटा
‘जामुनको रुख’बाट थिएटर मल–कीर्तिपुर रंगमञ्चमा नियमित नाटक सुरु
काठमाडौं । कीर्तिपुर राराहिलस्थित थिएटर मल–कीर्तिपुर रंगमञ्चमा नाटक ‘जामुनको रुख: सेमलेस भल्गारिटी’को मञ्चन
छोरी मान्छे !
पार्वती सामान्य घरमा जन्मिएकी छोरी हुन् । उनी सानैदेखि नाच्न गाउन खुब मन
सर्वोच्चलाई दाहालको जवाफ- ‘अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, नारा, जुलुस…
विवाह भोजमा कुटपिट गरी हत्या, ६ जना पक्राउ
पानीको बाल्टिनमा डुबेर १ वर्षीय बालकको मृत्यु
नेता महतोको प्रश्न -आफ्नो अधिकार मागेका थारु नेतालाई जेल हुँदा…
banner, अर्थ, आर्थिक, समाचार
के हो ब्याजदर करिडोर ? कसरी गर्छ काम ?